Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Faraca Midnimo oo Dhagaxlay Kusoo Dhamaaday.
Shirkii Faraca Midnimo oo Dhagaxlay Kusoo Dhamaaday.
Maanta oo Isniin ahayd taariikhduna ay ku beegnayd 29/2/16 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab ka dhacay shir balaadhan oo ay ku kulmeen xunbaha Faraca Midnimo ee xerada ka howl gala. Shirkan oo ahaa shirkii caadiga ahaa ee Faraca ayaa maanta lahaa muhuumad gooni ah waxaana kasoo qayb galay qaar kamid ah madaxda Jabhada.
Ugu horaynba shirkan oo ahaa mid balaadhan ayaa furmay abaare 2:30pm xiliga Dhadhaab waxaana sidii caadada ahaydba lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo aad u qiimo badan waxaana sitoos ah looguda galay Ajandayaashii shirka oo midka uguwayn uu ahaa Abaabulka bulshada. Waxaana ugu horaynba madasha laga akhriyay warbixin aad u dheer oo dal iyo dibadba ah.
Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay laanta arimaha bulshada oo xubnaha faraca u soo bandhigtay qaab shaqeedka Hogaanka udagan oo ladoonayo in lagu wada dhaqmo. Dhanka kale waxaa warbixin tirfac tiran laga dhagaystay laanta Dhaqaalaha ee faraca waxayna soobandhigeen shaxdii ugu dambaysay ee dhaqaalaha iyagoo xusay in uu jiro kor u kac badan oo xaga dhaqaalaha ah mudadii yarayd ee xilka ay hayeen. Intaas kadib waxaa lagu soo dhaweeyay Xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi Sooc oo ugu horaynba bulshada ka haqabtiray marxalada halganka Ogadenia iyo xaaladaha guud ee gumaysiga, sidoo kale Xildhibaan Sooc ayaa madasha ka akhriyay go’aanadii kasoo baxay Gudida Fulinta ee Jabhada oo dhawaan shirkuyeeshay wadanka Swedan sidoo kale wuxuu mudanahu siwayn ugu dheeraaday xoojinta halganka xaqa ah ee kasocda Ogadenia. Intaas kadib waxaa khudbado laga dhagaystay mas’uuliyiin kasocotay Ururka OYSU fariciisa Dhagaxlay iyo Gudida Qoxootiga Ogadenia laantiisa Dhagaxlay oo dhamaan laga dhagaystay kalmado muhiim ah.
Guntii iyo gunaanadkii waxaa si habsami ah Kusoo dhamaaday kulankii wuxuuna udhacay sidii loogu talagalay iyo si nabad ah ba.